Edere site Tranquillus | Jan 7, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
N'okpuru ọnọdụ ndị dị ugbu a, akwụkwọ ozi iji rịọ ka a kwụọ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ nwere ike ịbara gị uru. Nchegbu ego nwere ike ime ka ị gbanwee na ngwọta a. Anyị na-ekwukarị gbasara ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ. Usoro okwu abụọ a nwere ike bụrụ ihe edoghị anya. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ịkọwa ha. Obere nlebara anya n’isiokwu a na akowaputa ihe di iche na nkwekorita di n’etiti okwu ya abua.
Advance ma ọ bụ nkwụnye ego?
Na-agbagwoju anya, usoro abụọ a na-akọwa ụzọ dị iche iche. Ha abụghị otu. Na edemede L. 3251-3 nke Usoro oru iji cheta nke a. Ka anyị hụ ihe dị iche ọnụ.
Paybọchị ịkwụ ụgwọ n'ihu
Ọganihu bụ ego nke onye were ha n'ọrụ na-akwụ onye ọrụ ya ụgwọ maka ọrụ ha gaje ịrụ n'ọdịnihu dị nso. Emechabeghị ọrụ ahụ, mana onye ọrụ ahụ ga-enwe ike iji akụkụ nke ụgwọ ya. Nke a bụ obere ego nke ndị nwere mmasị ga-akwụghachi site n'ọrụ ya.
Ọ bụrụ n’ị na-arịọ onye isi gị ka ọ kwụọ gị opekatampe na ụgwọ ọnwa Septemba gị rue ngwụcha Ọgọstụ, mgbe ahụ arịrịọ gị bụ ka akwụ ụgwọ ọnwa. N’ebe a, onye were gị n ’ụlọ ọrụ nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ inye gị nkwụnye ego a na mbu.
Ọganihu ụgwọ ọnwa kwekọrọ na ego efu nke onye ọrụ kwuru. Enwere ike ịkwụ ụgwọ ya site na mbufe ego, ego ma ọ bụ ego. Na nkwekọrịta, ọ dị mkpa ịkọwa ego ole ọganihu ahụ wee mee ka onye ọ bụla bịanye aka na ya. Ọ dịkwa mkpa ịkọwapụta usoro nke nkwụghachi ụgwọ. Otu abuo a aghaghi inwe akwukwo edeputara ya.
Nkwụnye ụgwọ ọnwa
Nkwụnye ego ahụ dị iche na ụbọchị ịkwụ ụgwọ. N'ebe a, anyị na-ekwu maka ịkwụ ụgwọ n'ihu nke otu ụgwọ nke onye ọrụ ahụ akwụgoro. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụghị mgbazinye ego. Ego ole onye ahụ nwere mmasị rịọrọ na nkwụnye ego ya kwekọrọ nha ndị o nwetara. Onye a na-arịọ ka ewebata ụbọchị ịkwụ ụgwọ otu akụkụ nke ụgwọ ọnwa ya ma e jiri ya tụnyere ụbọchị nkịtị.
GỤỌ Jiri usoro nkwanye ugwu emeziri nke ọma kwalite ozi-e ndị ọkachamara gị
N'okpuru ọnọdụ ndị a, ekwesiri ịmara na nkwụnye ego agaghị agabiga ụgwọ ọnwa onye ọ bụla. Ọzọkwa, edemede L. 3242-1 nke Usoro Ọrụ na-enyekwu ozi gbasara isiokwu a. O kwuru na ọ ga-ekwe omume onye ọrụ were rịọ nkwụnye ego kwekọrọ na ụbọchị ọrụ iri na ise, nke ruru ọkara nke ụgwọ ọnwa ya.
Nke a na-egosi na site na iri na ise nke ọnwa ahụ, onye ọrụ nwere ikike iwu iji rịọ nkwụnye ego yiri nke ọrụ izu abụọ. Ọ bụ ikike onye were ya n’ọrụ enweghị ike ịgọnahụ ya.
N'ọnọdụ ndị dị a canaa ka onye were gị n'ọrụ nwere ike ịjụ itinye ego ma ọ bụ kwalite ụgwọ ọnwa?
Ọtụtụ ọnọdụ na-abanye ma kpebie ma ha ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na ụgwọ. Okwu ndị a dị iche iche dabere na ọnọdụ onye ọrụ, mana yana ọdịdị nke arịrịọ ahụ.
Banyere ọganihu ụbọchị ịkwụ ụgwọ, onye isi gị nwere nnwere onwe ma ọ bụ jụ arịrịọ gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nye ya ihe akaebe iji kwado arịrịọ gị. Ozi ọ bụla bara uru nke ga-egosi akpịrịkpa gị ihu ọma. Ikwesiri inweta nzaghachi di nma.
Iwu chọrọ ụlọ ọrụ gị ịnakwere arịrịọ ịkwụ ụgwọ gị. Agbanyeghị, iwu a nwere ike ịhapụ ndị ọzọ. Enwere ike ịjụ nkwụnye ego a ma ọ bụrụ na arịrịọ ahụ sitere n'aka onye ọrụ ụlọ, onye ọrụ oge, ndị ọrụ oge ma ọ bụ ndị ọrụ nwa oge.
Etu esi dee arịrịọ gị maka ịkwụ ụgwọ ụbọchị ịkwụ ụgwọ?
Ruo na ọdịmma gị mụmụọrọ gị ọnụ ọchị. Na ka e nye gị ụbọchị ịkwụ ụgwọ. Ọ ka mma ịtọlite ​​leta nke ị setịpụrụ ọnọdụ maka ịkwụ ụgwọ. Zipu akwụkwọ ozi arịrịọ maka ịkwụ ụgwọ gị site na ozi edebanyere aha na nnata nke nnata ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. N’ezie, izipu akwụkwọ ozi na nnabata nke nnata pụtara akwụkwọ iwu. Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na esemokwu. Na mgbakwunye, nhọrọ a nwere uru nke ịdị mfe, ngwa ngwa na ọnụ ala.
Daybọchị ịkwụ ụgwọ tupu arịrịọ
Isiokwu: Rịọ maka ọganihu na ụgwọ ọnwa
Ọ bụ ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ka m na-agwa gị banyere nchegbu onwe m. (Ezipụta nsogbu gị), M ga-enwerịrị nchikota ()ego ole ị chọrọ ịjụ) iji dozie ọnọdụ ahụ. N'ihi ya, achọrọ m ịrịọ gị otu maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa gị nke kwekọrọ na ego m chọrọ ngwa ngwa.
M na-atụle ma ọ bụrụ na ị kwenyere ịnye m nkwado gị, iji kwụghachi ego niile n'ime ọnwa asatọ. Maka nke a, a ga-ewepu ego kwa ọnwa site na ụgwọ ọnwa m n'oge a. Nke a ga - enyere m aka inyeghachi gị ego ahụ agbaziri ego na ego ga-adịrị mụ na ezinụlọ m.
Ekelere m gị maka ekele ị nwere maka arịrịọ m. Biko nabata, Madam, Sir, okwu nke mmetụta m dị iche.
Kedu ka onye ọrụ were rịọ nkwụnye ego n'aka onye were ya n'ọrụ?
Onye ahụ nwere ike ịnakọta nkwụnye ego site na arịrịọ dị mfe na akwụkwọ, site na post ma ọ bụ site na kọmputa. N'ebe ụfọdụ, a na-enweta akwụkwọ arịrịọ ịkwụ ụgwọ maka ndị ọrụ chọrọ irite uru na ha. Usoro a na - enyere aka ịhazi ọkwa ma mee ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe.
Na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, a na-arịọ arịrịọ ahụ na ngwanrọ dị n'ime. Nke a na - ejikọkọta sọftụwia na - akwụ ụgwọ ọrụ ozugbo onye njikwa na - akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ gosipụtara nke ọma.
GỤỌ Ozi ndị ọkachamara: Ụfọdụ iwu maka ụdị ịkpọ oku nkịtị
Akwụkwọ ozi nkwụnye ego dị mfe
Isiokwu: Arịrịọ maka nkwụnye ego na ụgwọ ọnwa
Ugbu a na ọnọdụ ọnọdụ ego siri ike, a na m arịọ gị ka i jiri obi ọma nye m ụgwọ ụgwọ ọnwa m maka ọnwa dị ugbu a.
Amaara m na ị kwere ka iwu nyere. Nye onye ọrụ ọ bụla chọrọ ya ime ụdị arịrịọ a mgbe ọrụ ụbọchị iri na ise gasịrị. Ọ bụ na ọnọdụ a ka m ga-achọ iji uru nke ịkwụ ụgwọ nke ego [ego na euro].
Na-ekele gị maka ịkwado arịrịọ m, biko nabata, Madam / Sir, ngosipụta nke ekele m.
Download “Payday Advance Request Letter.docx”	Salary-advance-request-letter.docx - Ebudatara ugboro 3846 - 16 Kb
Download “Akwụkwọ-arịrịọ-dacompte-simple.docx”	Akwụkwọ edemede-arịọ-dacompte-simple.docx - Ebudatara ugboro 3689 - 15 KB
Akwụkwọ edemede iji rịọ maka mbu ma ọ bụ nkwụnye ego January 8th, 2022Tranquillus
gara agaPagwọ ezumike na RTT: ego maka ndị ọrụ ụlọ ọgwụ
-esonụNational protocol: izu ike nke nkwanye nke teleworking na 100%